Akụkọ - Hebei Veterinary Immune Booster Industrial Technology Institute Institute guzobere
On November 15, 2020, Hebei Veterinary Immune Booster Industrial Technology Institute guzobere n'ụzọ gara nke ọma, dabere na Hebei Junyu ọgwụ co., LTD, kere na Hebei north college, liaocheng mahadum, shijiazhuang McIntosh biological technology co., LTD. Ememe mmeghe ahụ emere na Hebei junyu pharmaceutical co., Ltd.
E guzobere ụlọ akwụkwọ ahụ site na nkwado nke gọọmentị mpaghara, enyemaka nke ndị ọrụ ya na ọrụ siri ike nke ndị ọrụ Junyu.
Lọ akwụkwọ ahụ nwere ìgwè anọ: ndị otu na-ahụ maka nyocha sayensị, ndị nyocha na ndị otu mmepe, ndị otu mgbanwe mgbanwe, na ndị otu nọ na ya.
Maazị Liu, onye isi njikwa nke Hebei junyu pharmaceutical in co., Ltd kwuru: mmezi nke anụmanụ, iji "na-arụ ọrụ ozuzu ahụike, na-enyefe nchebe anụ ọhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" maka ozi ahụ, ọkachasị n'ọhịa nke ahụike ahụike nke ngwaahịa nkwalite ọgụ. , "mgbochi iji bulie mmepe ngwaahịa na ihe ọhụrụ" dị ka isi ọdịnaya, n'otu oge ahụ, usoro nlekọta ahụike maka mmepe na ihe ọhụrụ dịka isi ihe eji eme omume hebei junyu bara uru, gbadoro anya na ahụike anụmanụ, lekwasịrị anya na ịrụ ọrụ nke ọma ozuzu.
Site ugbu a gaa n'ihu, Hebei Veterinary Immune booster Industrial Technology Institute Institute rụrụ ọrụ. Ntọala nke ụlọ akwụkwọ nyocha ahụ ga-akwalite ọganihu nke teknụzụ na mmepe ogo nke ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na mpaghara Hebei.
Mee ka ikike teknụzụ nwere ike na asọmpi ahịa nke ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na-agwọ ọrịa. Institute ga-iwekota sayensị na technology ọhụrụ ego, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ dịghịzi enhancer dum ụlọ ọrụ yinye na nkà na ụzụ ọhụrụ, ịzụlite ọnyà isi technology ọhụrụ nnyocha na ụlọ ọrụ, na-eburu na mgbanwe nke na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ rụzuru, oru ọrụ maka ụlọ ọrụ, na-ewebata talent cultivation, na nkà mmụta sayensị na oru ohuru ohuru iji kwalite ulo oru mmepe atụmatụ nnyocha, yana nkwalite nke ulo oru ulo oru, na-akwalite mmepụta, ọmụmụ ihe na-eme nnyocha, na omimi nke njikọta na mee ngwangwa usoro ohuru nke ọrụ metụtara na mpaghara.